नेकपाभित्र सहमतिको खाका बनेलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुने, को को बन्लान् मन्त्री – Khabar PatrikaNp
नेकपाभित्र सहमतिको खाका बनेलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुने, को को बन्लान् मन्त्री
August 17, 2020 144
काठमाडौं, ३२ साउन । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद हल गर्नको लागि अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । उक्त कार्यदलको संयोजकमा महासचिव विष्णु पौडेल छन् । र, अध्यक्षद्धय ओली र दाहालनजिकका दुई दुई जना र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहबाट पनि दुई जना सदस्य छन् ।
ओली समूहबाट संयोजक पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, र दाहाल समूहबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल छन् । उता, वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरु डा. भीमबहादुर रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् ।
कार्यदल गठन गर्नुअघि नै दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नवगठित कार्यदलका संयोजक पौडेलबाहेक सबै सदस्यहरुलाई मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्दा मन्त्री बनाईने मोटामोटी सहमति ओली र दाहालबीच भएको छ ।
ओलीले मन्त्री पदको चारो फालेपछि विरोधी समुह तितरबितर
अध्यक्षद्धय ओली र दाहालबीच मुख्यमन्त्रीहरुपनि फेरबदल गर्ने सहमति बनेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री छोडेर केन्द्रमा आउन चाहेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक चुलिएसँगै अध्यक्ष ओलीले उनलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् । उनी गत असार १० यता प्रायः यतै छन् ।
यद्धपी ओली–दाहालबीच भएको पछिल्लो सहमतिलाई लिएर वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले तत्काल सचिवालय बैठकको माग गरेका थिए । सोहीअन्सार नेकपा सचिवालय बैठक भोलि बस्ने तय भएको छ ।
Source reporters nepal
Prevमलेसियाबाट नेपाल फर्किने अनिवार्य एक हप्ता होटल क्वारेन्टाइन, खर्चको जोहो गर्न आग्रह : दुतावास
Next(डब्लुएचओ)ले कोरानाका बिरामीलाई १२ देखि १६ घण्टासम्म घोप्टो परेर सुत्न सुझाव दिएको छ
यी चार राशि भएका व्यक्ति, जसले कमाउँछन् ट’न्नै सम्पति… पुरा पढ्नुहोस
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सम्बन्ध चिसिएको, बोलचालै बन्द
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29585)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (28183)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24597)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (22126)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13581)